Taorian’ny namonoan’ny lehilahy koetiàna iray ny vehivavy iray tao amin’ny fianakaviany, nohavaozina ireo antso hisian’ny fiarovan’ny governemanta · Global Voices teny Malagasy
Vehivavy telo no novonoin'ny havany tato anatin'ny herinandro vitsy farany
Voadika ny 09 Septambra 2021 7:34 GMT
Miaraka amin'ny Antenimieram-pirenana tsy ahitàna afa-tsy lehilahy, tsy mbola andrandrain'ireo Koetiàna miray fo amin'ireo vehivavy ny hisian'ny fandraisana fepetra malaky. Sary ho an'ny sehatry ny daholobe.
Tohina indray ireo vahoaka manerana ny firenena ao Koety, ahitàna olompirenena manodidina ny 1,5 tapitrisa eo ho eo, nandre ny famonoana vehivavy iray hafa, ny fanintelony tao anatin'ny volana maro araka ny filazambaovao avy any an-toerana. Niteraka onjana tebiteby sy fahasorenana teny anivon'ny faribolan'ny aterineton'ilay Fanjakana ao amin'ny Gôlfa ilay fahafatesana, ary nanavao ny antso ho an'ireo manampahefana mba hiaro ny vehivavy ao amin'ity firenena manankarena solika ity.
Ny 2 Septambra no nitranga tao amin'ny distrikan'i Taimaa ny heloka farany indrindra, rehefa novonoin'ny anadahiny ny anabaviny. Nitranga io nandritra ny fotoana nahatongavan'ny pôlisy namaly ny antson'ilay niharan-doza, izay nilaza fa voarahona sy tazonina tsy araka ny sitrapony ao an-trano efa nandritra ny roa volana izy, nefa ny pôlisy voatery niandry tety ivelany fa tsy niditra, hoy ny gazety any an-toerana. Rehefa tonga teny an-toerana hanamarina ny filaminany, nomen'ireo pôlisy alàlana ho afaka miverina miditra any an-trano ilay anadahy nandray azy ireo ka hamono azy, hoy ny tatitr'ireo mpilaza vaovao avy ao an-toerana.
Maika/ efa naharay mialoha ny tatitr'ilay niharam-doza ny pôlisy, omaly sy androany, ka tao anatin'izany izy no nilaza fa norahonana ho faty. Miaraka amin'ny fisian'ireo pôlisy tonga hanamarina fa mbola velona ilay anabavy, niditra tao an-trano hamono azy ilay mpamono, ary avy eo nitolo-batana tamin'ireo mpitandro filaminana!
Ireo vehivavy koetiàna, na efa lasa lavitra mihoatra ireo hafa ao amin'ny faritry ny Gôlfa Persika aza amin'ny resaka fandraisana anjara sy ny zavabita ara-pôlitika, nahazo nandatsa-bato tamin'ny 2005, dia mbola mitohy miatrika ny vahohon'ny fitondran-dehilahy eny anivon'ny ankohonan-dry zareo sy ny rafitra pôlitika, manohintohina ny safidy sy ny fahalalahan-dry zareo. Tsy ela akory izay, natrehan'ireo vehivavy koetiàna ny firongatry ny tranga famonoana vehivavy, niteraka hetsipanoherana marobe hitakiana ny firotsahana an-tsehatry ny fanjakàna hisorohana ny heloka bevava tahaka izany.
Ety anaty tambajotra, maneho ny fahagagàny ny vahoaka manoloana ny fahalainana sy tsy fihetsehan'ireo manampahefana. Nibitsika i Maha Almari , vehivavy koetiàna mpikatroka ho an'ny zon'ny vehivavy:
Raha kely indrindra, tao anatin'ny herinandro teto Koety, dia vehivavy telo no maty novonoin'ireo lehilahy havany.
Ary dia mikombom-bava ny firenena, tsy misy fialofana ho an'ny vehivavy, tsy misy antokon'asa natokana handinika ny herisetra atao amin'ny maha-lahy na vavy, na fanekena akory aza hoe misy ny famonoana vehivavy, tsy resahana intsony ny fampanantenana hanao zavatra tsaratsara kokoa.
Tamin'ny bitsika iray hafa, nandrisika ireo vehivavy izy hanery ireo tomponandraikitra. “Manontany tena aho hoe inona no hitranga raha ny vehivavy, ny vehivavy rehetra, eto Koety no midina iray andro eny an'arabe. Avy any an-tranony amin'ny maha-reny, avy any amin'ny asany amin'ny maha-mpitsabo na mpiasan'ny banky, avy any an-tsekoly amin'ny maha-mpianatra sy mpampianatra. Manontany tena aho raha mety hampifoha azy ireo izany,” hoy ny nosoratan'i Almari.
Amin'ny fanaingàna ny governemanta koetiàna hanao hetsika, Koetiàna iray hafa mpampiasa Twitter no nanoratra hoe:
— ♀ (@skakaxll) September 1, 2021
Miangavy, manaova zavatra, maty vonoina isanandro ireo vehivavy eto Koety ary tsy mahatsiaro fahatoniana intsony mihitsy izahay!! @UN @UN_Women #جريمة_تيماء pic.twitter.com/g3AmMPFJfY
Anwar Abdulsamad Dashti, lehiben'ny “Freedom Society”, fikambanana tsy miankina natomboka tao Koety tamin'ny 2017 mba hanohanana ireo soatoavina liberaly, no nanoratra tao amin'ny Twitter fa ny tsy fisian'ny hetsika matotra hasetry ireny heloka bevava ireny dia miantraika amin'ny tsy fivadihana/fitokisan'ny vahoaka ny fireneny. Nampiany tanaty bitsika iray hafa fa nanokatra laharan'antso-fanampiana iray ny orinasany mba handraisana ireo antso vonjy.
إلى نساء الكويت ??
دفاعنا عنكم واجب إنساني و وطني ??
لن أخاف من مواجهة بعض العوائل و القبائل في الدفاع عنكم??
— أنور عبدالصمد دشتي ?? (@Anwar_Liberal) September 2, 2021
Ho an'ny vehivavy eto Koety
Adidy nasiônaly sy amin'ny maha-olona sy fiarovana anareo
Tsy mampahatahotra ahy ny hiatrika fianakaviana sy foko vitsivitsy amin'ny fiarovana anareo
Ireo izay tsy tsara taizan'ny fivavahana, dia hitondra tena mifanaraka amin'ny lalàna.
Mila olona sahy, fa tsy maherifo, i Koety, ery ambadiky ny pilipitran'ny Antenimieram-pirenena.
Ny Abolish 153 dia fanentanana iray mikatsaka ny hanesorana ny andininy faha 153 ao anatin'ny didy famaizana eto amin'ny firenena, izay “manome sazy tena maivana be ho an'ireo nahatanteraka heloka bevava ho fiarovam-boninahitra,” mandray azy io ho hadisoana izakàna, raha be indrindra, sazy famonjàna telo taona sy/na sazy ara-bola 14 dinara (46,59 dolara amerikàna). Tao anaty bitsika iray nalefa taorian'io heloka bevava io, nilaza ilay fanentanana fa:
Tsy mahazatra ilay toedraharaha… vehivavy telo maty novonoin'ny havan'izy ireo akaiky tao anatin'ny roa herinandro. Tokony hirotsaka an-tsehatra avy hatrany ny mpitandro filaminana ary tsy tokony hatahotra izay mety ho vokany eo anatrehan'ny lalàna rehefa misy tranga tahaka izao.
Maninona isika no hatramin'izao tsy manana fialofana? #Atsaharo_NyFamonoana_Vehivavy #Stop_murdering_women
Niseho ihany koa ny hetsipanoherana teny an-kianja ho entina hanerena ireo mpanao lalàna mba hanao zavatra.
Fanindroany tamin'ity herinandro ity, niainan'i Koety ny fihetsiketsehana roa niarahan'ny lahy sy ny vavy, mba hampitsaharana ny fanaovana tsinontsinona sy ny famonoana vehivavy misy amin'izao fotoana izao…sns.
Dingana iray goavana tohanantsika rehetra ity.
Tena ankasitrahana ny ezaka ataon'ireo lehilahy sy vehivavy!
Tohizo tahaka izao hatrany!
Na izany aza, miaraka amin'ilay hoe tsy misy afa-tsy lehilahy ny ao amin'ny parlemanta—tsy nahavita nahazo seza ireo vehivavy nirotsaka tamin'ny fifidianana tamin'ny taona lasa—sy ny fahavitrihana ara-pôlitika mihahenjana ary miafara amin'ny fifandirana tsy mitsahatra eo amin'ny antenimiera sy ny governemanta, manify dia manify ny vintana hisian'izany fihetsehana malaky avy amin'ireo mpanapaka hevitra ara-pôlitika izany mba hisorohana ny heloka bevava mitovitovy amin'izany.
Tiorkia 15 ora izay